कोपा अमेरिका जित्ने धोको पुरा होला मेस्सीको ? – Online Kendra – Nepal no.1 News portal
कोपा अमेरिका जित्ने धोको पुरा होला मेस्सीको ?
२६ असार २०७८, शनिबार १३:२२ July 10, 2021 OnlineKendra
असार २६,काठमाडौँ । ३४ वर्षीय मेस्सीले बार्सिलोनाबाट १० पटक ला लिगा र ४ पटक च्याम्पियन्स लिगको उपाधि जितेका छन् । ६ पटकको बालोन डे ओर विजेता मेस्सीले अर्जेन्टिनाका लागि भने सन् २००८ मा चीनमा भएको ओलम्पिकमा मात्रै स्वर्ण पदक जितेका थिए ।
उता ब्राजिलका डिफेण्डर मार्क्वन्होसले मेस्सीलाई आफ्नो उद्देश्यमा पुग्नबाट रोक्न प्रयास गर्ने बताएका छन् ।
के त्यसमा अर्जेन्टिना सफल होला त रु दुई वर्षअघि घरेलु मैदानमा उपाधि जितेको ब्राजिलले भने अहिलेसम्म ९ पटक मात्र कोपा जितेको छ र सर्वाधिक जित्नेमा तेस्रो स्थानमा छ । ब्राजिल लगातार दोस्रो पटक उपाधि जित्ने लक्ष्यमा छ ।
खेलकुदकोपा अमेरिका जित्ने धोको पुरा होला मेस्सीको ?
ब्राजिल बिरोधी ब्राजेलियन समर्थकलाई नेइमारले भने, ‘नर्क जाउ….’
एमाले कार्यदलको बैठक बस्दै, मुख्यतः तीनवटा विषयमा छलफल हुँदै